STANDALONE DEFENDER WINDOWS 10 - WINDOWS - 2019
Windows ọhụrụ nke Windows 10 nwere "ihe na-akwadoghị Windows" nke na-enye gị ohere ịlele kọmputa gị maka nje virus na wepụ ihe omume ọjọọ ndị siri ike iwepu na sistemụ arụmọrụ.
Na nyocha a - otu esi agba onye nchebe nke Windows 10, yana otu ị ga - esi jiri Windows Defender Offline na nsụgharị OS - Windows 7, 8 na 8.1. Hụkwa: Best Antivirus maka Windows 10, Best Free Antivirus.
Gbaa ọsọ Windows Defender nke anọghị
Iji jiri onye na-akwado onye na-anọghị na ya, gaa na ntọala (Malite - Gear icon ma ọ bụ Nweta Igodo), họrọ "Imelite na Nche" wee gaa "Ngalaba Defender".
Na ala nke ntọala nchebe enwere ihe ahụ "Onye Mgbado Na-akwadoghị Windows". Iji malite ya, pịa "Lelee offline" (mgbe ị na-echekwa akwụkwọ a na-azoputaghi na data).
Mgbe ịpịrị, kọmputa ahụ ga-amaliteghachi ma kọmputa ga-akpachapụ anya maka nje na malware, ịchọ ma ọ bụ iwepụ nke siri ike mgbe ị na-agba ọsọ Windows 10, ma ọ ga-ekwe omume tupu ya amalite (dị ka ọ na-eme na nke a).
Mgbe i mechara nyochaa, kọmputa ahụ ga-agbanyeghachi, yana ọkwa ị ga-ahụ akụkọ gbasara arụmọrụ ahụ.
Etu ibudata ihe ngosi Windows Defender ma gbaa ya ọkụ na kọmputa USB ma ọ bụ diski
Onye na-agbachitere Windows Antivirus dị na weebụsaịtị Microsoft maka nbudata dị ka ihe oyiyi ISO, na-edegara diski ma ọ bụ USB flash ngwa ngwa maka nbudata na ha ma chọpụta kọmputa gị maka nje na malware na ọnọdụ offline. Ma na nke a, enwere ike iji ya na Windows 10, kamakwa na nsụgharị nke os.
Download Windows Defender Ndepụta aha ebe a:
//go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=234124 - 64-bit version
//go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=234123 - 32-bit version
Mgbe nbudata, na-agba faịlụ ahụ, kwenye na usoro eji ma họrọ ebe ịchọrọ itinye Windows Defender Offline - ọkụ na-ere ọkụ na diski ma ọ bụ USB flash ma ọ bụ chekwaa dika oyiyi ISO.
Mgbe nke a gasịrị, naanị ị ga-echere ruo mgbe arụchara usoro ahụ ma jiri boot drive na onye na-akwado Windows na-akwadoghị iji kpochapụ kọmputa gị ma ọ bụ laptọọpụ (e nwere ihe dị iche iche na saịtị ahụ na ụdị nyocha - Anti-virus buut disks na draịva flash).